Wararka - Da'da 5G, waxaa jiri doona isbadalo waaweyn oo dhankaan ah
Marka la barbardhigo tikniyoolajiyadda isgaarsiinta dhaqanka, 5G waxay leedahay waxqabad xoogan, muuqaallo badan iyo deegaan cusub, oo si wanaagsan u buuxin kara shuruudaha dalabyada shirkadaha wax soo saarka dhaqameed ee shabakadda bilaa-wareegga ah ee wax-soo-saarka caqliga leh, iyo wadista tikniyoolajiyadda macluumaadka, tikniyoolajiyadda wax soo saarka, tikniyoolajiyadda cusub. iyo tikniyoolajiyad cusub oo tamar si ay si ballaadhan ugu dhex galaan dhammaan qaybaha wax soo saarka elektarooniga ah, sidaas awgeedna u horseedaysa isbeddelo farsamo oo weyn warshadaha. Tusaale ahaan, taageerada shabakadda 5G oo leh xawaare dhakhso badan, dib-u-dhac hoose, awood ballaaran iyo kalsooni sarreysa, codsiyada goosgooska ah ee baaritaanka elektarooniga ah iyo cabbiraadda, sida mowjadda millimitir, MIMO-baaxad weyn iyo la-qabsiga beamforming, waa la filayo inuu noqdo mid dhab ah, taas oo shaki la’aan u baahan doonta in si weyn loo wanaajiyo saxnaanta iyo hufnaanta baaritaanka elektiroonigga iyo cabbiraadda.
Dhanka gawaarida, taleefanka gacanta, qalabka guryaha, qalabka la gashado, qalabka warshadaha iyo qalabka injineernimada, 5G codsiga teknolojiyaddu waa mid dhameystiran oo qoto dheer. Qeybta warshadaha aasaasiga ah ee qalabka isgaarsiinta, qeybta isgaarsiinta, anteenada, raadiyaha soo noqnoqda, iwm. Oo ay taageerto teknolojiyadda 5G, tikniyoolajiyadda 5G waxay muhiimad cusub u keeni doontaa aagagga waxsoosaarka warshadaha. Tusaale ahaan, warshadaha SMT, oo ka faa'iideysanaya baahida sii kordheysa ee teknoolojiyadda 5g ee qalabka soo-noqnoqda iyo xawaaraha sare leh, PCB waxay ku saabsan tahay inay keento xaalad wanaagsan oo kor u kacaysa mugga iyo qiimaha; codsiga saldhigga 5G iyo taleefanka gacanta 5G, oo ay ku jiraan korantada baabuurta, waxay keeneysaa xambaarayaal badan, bareeg badan, tirade sare iyo tiknoolajiyada kale, sidaa darteed R & D ee qaybaha isgaarsiinta ee u dhexeeya anteenada hore ee RF iyo baseband chip ayaa horumar degdeg ah; iyo nidaamka qalabka elektarooniga ah ee ay taageerayaan 5G Manufacturing wuxuu ka dhigi karaa habka wax soo saarku mid sax ah, adeegsi kala jaad ah iyo mid hooseeya, iyo warshadaha sida xirashada caqliga iyo soosaarka warshadaha waxay keeneysaa faa'iidooyin wax ku ool ah. Waa la arki karaa in 5G ay isticmaalayso faa'iidooyinkeeda aan la qiyaasi karin si ay awood ugu siiso warshadaha wax soo saarka elektarooniga ah inay si joogto ah oo habsami leh ugu shaqeeyaan xaalado kala duwan, taas oo ka caawin doonta warshadaha wax soo saarka elektarooniga ah hagaajinta xaaladaha shaqada, yareynta faragelinta gacanta ee khadadka wax soo saarka, iyo si weyn hagaajinta xakamaynta hababka wax soo saarka.
Waxsoosaarka caqliga ayaa diyaar u ah inuu u bilaabo 5G warshadaha taageerada haadka degdega ah
Marka lagu daro warshadaha wax soo saarka elektarooniga ah, 5G waxay si buuxda u dabooli kartaa baahiyaha isku xirnaanta qalabka iyo codsiyada isdhexgalka fog ee jawiga warshadaha. Qeybta wax soo saarka caqliga leh ee ay matalaan internetka waxyaabaha, xakamaynta otomaatiyada warshadaha, robotka daruuriga ah, iwm. Waxay furi doontaa casri cusub oo isku xirnaan ballaaran ee wax walba iyo isdhexgal qoto dheer oo bini aadam iyo kombiyuutar horay loogu sii wado iyadoo la kaashanayo teknolojiyadda 5G.
Maaddaama ay tahay tiknoolajiyad muhiim ah oo lagu taageerayo isku xirka dadka, mashiinnada iyo qalabka, Internetka waxyaabaha iyo teknolojiyadda 5G waxay sameeyaan xiriir dhameystiran. Adeegsiga internetka ee waxyaabaha wuxuu ku tiirsan yahay 5G si loo siiyo xaalado kala duwan oo xalalka isku xirka wireless, iyo bisaylka heerarka teknolojiyadda 5G sidoo kale waxay u baahan yihiin kicinta iyo kor u qaadista internetka waxyaabaha. Xakamaynta otomaatiggu waa codsiga ugu aasaasiga ah warshad wax soo saar caqli badan. Nidaamkeeda asaasiga ahi wuxuu u baahan yahay saxnaan sare, daahitaan hoose iyo isgaarsiin nidaam sare leh. Kaliya 5G ayaa ka dhigaysa arjiga xakamaynta xirida wareejinta suurtagal iyada oo loo marayo isku xirka shabakadda wireless.
Waxaa la yaab leh, isla muddadaas Nepcon Shiinaha, oo la qaban doono Abriil 24-26, warshadda caqliga iyo carwada tiknoolajiyadda otomaatigga ah ayaa daahfuri doonta khadka wax soo saarka "smart production DreamWorks" 2.0, oo ah qaabka ugu habboon ee wax soo saar si buuxda loogu soo bandhigi karo firfircoonaanta habka wax soo saarka ee isku xidhka qalabka khadka wax soo saarka. Buuxi amarka isku-dubaridka alaabta elektarooniga ah ee habka wax soo saarka elektarooniga ah oo dhameystiran oo ku saabsan meelaynta amarka-waqtiga dhabta ah ee goobta, soo-qaadista qaybaha, isku-darka qolofka iyo baaritaanka otomaatiga ah.
Dhinaca saadka, laga bilaabo maaraynta bakhaarka ilaa qaybinta saadka, waxaan u baahanahay daboolis ballaaran, daboolid qoto dheer, adeegsiga tamarta oo hooseysa, isku xirnaan ballaaran, tikniyoolajiyadda isku xirnaanta qiime jaban iyo daboolista shabakadda, iyo shabakadda 5G ayaa si wanaagsan u dabooli karta baahiyaha noocaas ah. Muuqaalka wax soo saarka wax soo saarka caqliga leh, badanaa waxaa lagama maarmaan u ah robotku inuu yeesho abaabul iyo karti iskaashi si uu ula kulmo wax soo saarka jilicsan, taas oo keenta baahida robot ee daruurta. Tiknoolajiyada 5g waxay u guureysaa tiro badan oo ah shaqooyinka xisaabinta iyo howlaha keydinta xogta daruurta, taas oo si weyn u yareyn karta qiimaha iyo isticmaalka tamarta qalabka robotka, isla markaana si qoto dheer u daboolaya baahiyaha wax soo saarka dabacsan.
Si loo hubiyo, tiknoolajiyada 5G waxay fure u noqon doontaa taageerida isbeddelka Waxsoosaarka Sirdoonka mustaqbalka. Uma adeegsan karto oo keliya xaalado kala duwan si ay isugu xirto dad si ballaaran u firdhisan, mashiinno iyo qalabba leh, iyo dhisidda internet mideysan, laakiin sidoo kale ku taageerta dhammaan barnaamijyada internetka mobilada leh waqtiga-dhabta ah iyo kalsoonida sare si looga caawiyo shirkadaha wax soo saarka inay ka takhalusaan qasnaanta tiknoolajiyaddii hore ee shabakadda wireless, taas oo saameyn togan ku yeelan doonta hirgelinta Internet-ka warshadaha iyo is-beddelka qoto dheer ee soo saarista caqliga leh Muhiimadda.
Laga soo bilaabo furitaankii Boao Forum ee Aasiya bishii Abriil 2018 illaa qabashada shirkii shaqada dhexe ee dhaqaalaha dhammaadka sanadka, 5G lama yaabin inuu noqdo ereyga muhiimka ah ee sanadka ee dhinacyada dhaqaalaha. Jiil cusub oo tikniyoolajiyadda isgaarsiinta moobiilka, 5G wuxuu leeyahay ugu yaraan 10 jeer xawaaraha ugu sarreeya ee 4G, dib u dhigista gudbinta heerka millisecond iyo awoodda isku xirnaanta heerka 100 bilyan. Dhismaheeda, dhaqaalaha dhijitaalka ah ee daboolaya khadka tooska ah iyo kan khadka, isticmaalka iyo wax soo saarka, barmaamijka iyo bey'ada waxay heli doonaan xoog wadis badan. Gaar ahaan warshadaha wax soo saarka elektarooniga ah, oo loo arko inay yihiin "xudunta adag" ee dhaqaalaha qaranka, ayaa ku jirta xilli xasaasi ah oo isbeddel iyo casriyeyn ah. Waxay ubaahantahay taageero tiknoolajiyad cusub oo dheeri ah oo ay matalayaan 5G si loo helo wareeg cusub oo wareegga koritaanka iyo xawaaraha koritaanka, iyo in isbadal weyn lagu keeno qaabka wax soosaarka iyo qaabka horumarka.
Waxaan bixinnaa xalal SMT ah oo loogu talagalay soosaarayaasha wax soo saarka 5G, Siemens mounter, Fuji mounter, Panasonic mounter, Samsung mounter iyo qalabka durugsan ee SMT, ku soo dhawow inaad wax weydiiso!